> Resource > Mac > Movie Editor for Mac: Hel Best Movie Editor for Mac
Maalmahan qalabka tafatirka filim oo kala duwan ayaa diyaar u ah dadka isticmaala Mac in xaalkaa movie. IMovie waa mid ka mid ah fursadaha sida ay tahay Tifaftiraha movie pre-rakibay Mac. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in mid adag bilowga ah si ay u isticmaalaan iyo waxa jabaa badan ku Mac. Hubi tutorial video ku saabsan sida loo edit videos on Mac hore oo kale.
Kala duwan, Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) waa editor movie sahlan in la isticmaalo Mac in qoreysa diyaariyeen ah ee qalab movie tafatirka. Waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala Mac iyo taageerayaasha movie tafatirka. Ay timaado ka buuxaan hodan muuqaalada movie tafatirka: timmaha video iyo abuurka, kala guurka ku daray, music, iyo saamaynta gaar ah. Waxaa intaa dheer, ka filimada saxar ah lagu ciyaari karaa noocyo kala duwan ee qalabka ay ka mid yihiin iPod, iPhone, iPad, PSP, PS3, Zune, Madaxweyne Siilaanyo iyo telefoonada gacanta. Waxa kale oo aad iyaga la wadaagi kartaa bogga internetka sida YouTube. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Hadda download tafatiraha movie ugu fiican oo ay leeyihiin isku day ah!
1 duwan Video, Audio ama Photo qaabab ay taageerayaan
Marna ha u baahan tahay si loogu badalo video, audio ama sawir in qaab kale oo ka hor tafatirka. Just-iska-n-hoos u files si ay suuqa kala tafatir ah! Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) wuxuu taageeraa qaabab badan la gelin, oo ay ku jiraan Video: caadiga ah iyo HD Most qaabab waaweyn, oo ay ku jiraan FLV, MOV, AVI, MKV, FLV, wmv, TS, MTS regelingen, M4A, AAC, BMP, JPG, PNG iyo badan.
2 Xoog Features Video Faalladaada
Kasta oo hawlaha tafatirka caadi movie fudud looga heli karo in Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac). Qaar ka mid ah sifooyinka gaar ah sida mosaic wareeg ah usii, oo ka horimaanaya waxaa sidoo kale ka mid ahaa:
Si fudud gooyay, darsamaan, kala, dalagga, shaandheyn aad movie in hal click.
Ku dar soundtracks, voiceovers, music iyo qoraallada si kor loogu qaado movie.
Ka codso in ka badan 80 sida diirada sameeyo filim qurux badan oo cad.
Dooro ka kala guurka 60 iyo 13 Intro / credits sida aad jeceshahay.
Saamaynta gaarka ah ku darto xiiso leh oo dheeraad ah si video: video & xawaaraha audio, humaag, wareeg ah usii, ka horimaanaya.
3 Your Movies, Jidadkiinna wadaag
La wadaag curiyay aad asxaabta iyo qoyska la xad lahayn. Waxaad arki doonaa qaybsiga dhan siyaabood ee suurtagal ah ee Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac):
Save the video aad Mac in qaab kasta oo: MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, ASF, MOV, F4V iyo in ka badan.
Dhoofinta in qaab kala duwan ee ka ciyaaro meel, iPod, iPhone, iPad, PSP, PS3, Zune, Madaxweyne Siilaanyo.
Geliyaan si ay u website sida YouTube aan ka tago barnaamij ka buuxsama oo kaliya in macluumaadka aad xisaabta.
Si toos ah gubi video inay DVD loogu daawashada TV-ga aad DVD guriga ciyaaryahanka.
Hadda download tafatiraha movie ugu wanaagsan ee Mac si loo kobciyo oo dunida aad digital.
Sony Video Editor: Sida loo Edit Videos ka Sony fiidiyo
Sida loo Beddelaan WebM in MP3 on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Sida loo Beddelaan M4V on Mac Mac isticmaalaya M4V Converter (El Capitan ka mid ah)
File Recovery MacBook: Ka Dib masaxay, formatted & dibabaxayaal Faylal ay ka Your Mac
Photo Kan sameeyey Calendar la 2013 arrimo Calendar